KaOS 2022.04 dia efa nivoaka ary ireto ny vaovao | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 03/05/2022 00:57 | Fitsinjarana
Nambara ny famoahana ny dikan-teny vaovao amin'ny fizarana Linux "KaOS 2022.04".fizarana Linux irery, nifantoka manokana tamin'ny tetik'asa KDE, zavatra mitovy amin'ny an'ny KDE Neon (fizarana miorina amin'ny Ubuntu). aza KaOS dia fizarana namboarina avy tany am-boalohany miaraka amin'ireo tahiry ao aminy.
Amin'ny maha distro azy azy, dia mampiasa tontolo desktop KDE Plasma izy io. Ho an'ny fampisehoana tsara kokoa dia ampiasaina ny tranomboky Qt, izay tsy mifanaraka amin'ny hafa mitovy aminy.
KaOS havaozina eo ambanin'ny Rolling Release, isaky ny roa volana misy kinova vaovao navoaka azo alaina avy amin'ny terminal na sary ISO. Ny fonosana dia tantanan'i ny fitaovana ihany, ho an'ny kinova miorina ihany, ary fehezin'ny ny mpiorina Pacman.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny Arch Linux, saingy nanamboatra ny fonosany manokana ireo mpamorona, izay misy ao amin'ny toerana anaovany azy ireo.
1 Vaovao lehibe momba ny KaOS 2022.04
1.1 Sintomy ny KaOS 2022.04
Vaovao lehibe momba ny KaOS 2022.04
Amin'ity dika vaovao amin'ny fizarana izay atolotra ity, ny fototry ny rafitra dia nohavaozina ho linux Kernel version 5.17.5, Ankoatr'izay Systemd version 250.4 dia tafiditra, nafindra tao amin'ny Mesa 22.0.2 ny fitambaran-tsary, raha nohavaozina ho KDE Plasma 5.24.4, KDE Frameworks 5.93.0, KDE Gear 22.04 ary Qt 5.15.3 miaraka amin'ny patch avy amin'ny tetikasa KDE ny singa desktop. Ny fonosana dia misy fonosana miaraka amin'ny Qt 6.3.0 ihany koa.
Misy endri-javatra vaovao tsara sy fanatsarana sasany nampidirina. Ny endri-javatra vaovao an'ny Konsole dia ny Quick Commands, izay ahafahanao manokatra tontonana baiko haingana avy amin'ny Plugins> Show Quick Commands, izay ahafahanao mamorona script fohy ampiasainao matetika.
Nohatsaraina ny plugin SSH an'i Konsole bebe kokoa ary azonao atao ny manendry mombamomba hita maso samihafa. Ho an'i Kdenlive, safidy vaovao roa no misongadina: afaka mamorona mombamomba manokana ianao mba hifanaraka tsara amin'ny filanao ny sarimihetsika nadikao, ary azonao atao koa ny mandika araka ny faritra, ka raisinao ho fanondroana ireo torolalana amboarinao ao amin'ny fandaharam-potoana.
Okular izao dia mampitandrina avy hatrany rehefa misy antontan-taratasy tokony hosoniavina, saingy tsy misy mari-pankasitrahana nomerika, miaraka amin'ny Skanpage, azonao atao ny mizara antontan-taratasy voasokajy (anisan'izany ny PDF maro pejy) amin'ny alàlan'ny rafitra fizarana ankapobeny an'ny KDE, izay ahafahanao mandefa antontan-taratasy amin'ny hafatra avy hatrany. fampiharana, serivisy rahona an-tserasera, serivisy sosialy, ary amin'ny alàlan'ny Bluetooth mankany amin'ny fitaovana hafa.
Ho fanampin'izay, afaka mahita ao amin'ity dikan-teny vaovao an'ny KaOS 2022.04 ity ihany koa isika kinova nohavaozina avy amin'ny fonosana Glib2 2.72.1, Boost 1.78.0, DBus 1.14.0, Vulkan 1.3.212, Util-linux 2.38, Coreutils 9.1 ary Libus 1.0 .26. Ny fananganana dia misy sampana LTS vaovao an'ny mpamily NVIDIA 470.xx.
Mba handaminana ny fifandraisana amin'ny tambajotra tsy misy tariby, fa tsy wpa_supplicant, dia ny processus background IWD novolavolain'ny Intel no ampiasaina, ary ampidirina ny fampiharana scanning document Skanpage.
Vaovao iray hafa amin'ity dikan-teny vaovao ity, Ny fomba fijery log dia nampiana tao amin'ny installer Calamares, izay mamela anao hampavitrika ny fampisehoana log miaraka amin'ny fampahafantarana momba ny fandrosoan'ny fametrahana fa tsy fampisehoana slide fampahafantarana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity fizarana vaovao ity ianao dia afaka mijery ny antsipiriany amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ny KaOS 2022.04
Ary farany, raha mbola tsy manana KaOS napetraka ao amin'ny solosainao ianao ary te hampidina sy hametraka an'ity fizarana Linux mifantoka amin'ny tontolon'ny birao KDE ity amin'ny solosainao na te hizaha azy eo ambanin'ny masinina virtoaly ianao.
Ny hany mila ataonao dia mandeha mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny fizarana ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny maka ny sarin'ny rafitra. Ny rohy dia ity.
Si efa mpampiasa KaOS ianaoTokony ho nahazo ireo fanavaozana ireo ianao tao anatin'ny andro vitsivitsy. Fa raha tsy fantatrao raha efa napetrakao izy ireo, sokafy fotsiny ny terminal ary ampandehano ao aminy ireto baiko manaraka ireto:
Amin'izany dia tsy hanaiky ny fanavaozam-baovao ianao raha misy izy ireo ary mamporisika ny hamerenana amin'ny laoniny ny solosainao aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Efa nivoaka ny KaOS 2022.04 ary ireto ny vaovao
Microsoft dia nanatevin-daharana ny Open 3D Foundation, motera lalao misokatra an'ny Amazon